Evangeline Garcia - Real Estate Real Estate avy amin'ny Provident
Mifandraisa amin'i Evangeline Garcia
Evangeline dia nanomboka ny asany tamin'ny naha-mpiasan'ny governemanta azy tany Filipina talohan'ny nahatongavany ho iray tamin'ireo mpanao fangataham-barotra marina indrindra tao Dubai. Izy dia mpandraharaha maromaro RERA hatramin'ny 2014 ary manokana amin'ny sehatra ara-barotra sy fonenana any amin'ny toerana ambony toy ny Jumeirah Lakes Towers (JLT), Dubai Marina, ary The Springs, izay nivarotany trano maromaro manokana.
Miaraka amin'ny fananana trano tsy fanao ho toy ny fironana farany amin'ny tsenam-barotra amin'izao fotoana izao, dia miara-miasa izy miaraka amin'ireo mpandraharaha ara-barotra samihafa mba hahita, hivarotra, ary hivarotra karazam-pitantanana samihafa any amin'ny faritra. Izany dia mahatonga azy ho matihanina mpandala ny ara-dalàna raha mikasika ny lafiny samihafa amin'ny kianjan'ny trano.
Amin'ny maha-mpandraharaha amin'ny fotoana feno azy, dia miezaka mafy izy hanomezana tolotra 5-kintana ho an'ny mpanjifany. Te hividy na hivarotra trano izy, ary miantoka ny milevina fanampiny amin'ny fanomezana ny fampahalalana sy toro-hevitra tsara indrindra. Heveriny fa ara-drariny, fifandraisana amin'ny mpanjifa, ny fandefasana azy manokana, ary ny famerenana ny mpanjifa ho fototra iorenan'ny asa aman-draharaha mendri-kaja.
Mila torohevitra matihanina amin'ny famokarana trano? Mifandraisa amin'i Evangeline amin'izao fotoana izao!
Mombamomba ny mpanoratra :31777
Properties 42 avy amin'i Evangeline Garcia
Tsara ny fanolorana 1BR, Bonnington, JLT
Vonona amin'ny May2019, 2BR apt. 50% posthandover
Investors Deal | 2BR + M |